अलौकिक शक्तिका कारण अमर ४ ऋषि ! - NepalKhoj
अलौकिक शक्तिका कारण अमर ४ ऋषि !
नेपालखोज २०७८ पुष ३० गते ५:००
हिन्दु शास्त्रहरूमा सत्ययुग र त्रेतायुगका धेरै महान् योद्धाहरूलाई चिरञ्जीव भनिएको छ । तर यस्ता धेरै ऋषि–मुनिहरू पनि छन्, जो अमर छन् । जसमा पाण्डवहरूका गुरु कृपाचार्य पनि पर्छन् । कलियुगमा पनि ऋषिहरू जीवित छन् ।
दुर्वासा ऋषि– वैदिक तथा पुराण ग्रन्थहरूमा प्रत्येक युगमा विद्यमान दुर्वासा ऋषिको धेरै ठाउँमा वर्णन गरिएको छ । सत्ययुगदेखि कलियुगसम्म हरेक युगमा बसेको बताइन्छ । त्यही भएर आज पनि उनी जीवित छन् । महर्षि अत्रिका पुत्र दुर्वासा भगवान् शिवको कृपाले देवी अनुसुयाको गर्भबाट जन्मेका थिए । दुर्वासा ऋषिलाई सबैभन्दा क्रोधित ऋषि मानिन्छ । परम ज्ञानी र शक्तिशाली भएका कारण उनलाई महर्षि भनिन्थ्यो ।
मार्कण्डेय ऋषि– भागवत पुराणमा मार्कण्डेय ऋषिको वर्णनमा उनलाई अमर भनिएको छ । भगवान शिवको वरदानले मार्कण्ड ऋषिबाट जन्मेको बालकको नाम मार्कण्डेय राखियो, जो पछि महान् ऋषि बने । शिवको वरदान अनुसार मार्कण्डेयको आयु मात्र १६ वर्ष थियो । आफ्नो छोटो मृत्यु थाहा पाएर, मार्कण्डेयले अन्तिम क्षणमा भगवान शिवको तपस्यामा प्रत्येक क्षण बिताए। यसबाट शिव प्रसन्न भए र मार्कण्डेयलाई अमरत्वको वरदान दिए। त्यसैले ऋषि मार्कण्डेय आज पनि जीवित रहेको विश्वास गरिन्छ ।
महर्षि वेदव्यास– महर्षि वेदव्यासले वेदव्यास बोल्दै गणेशलाई लेख्दै महाभारतको रचना गरेका छन् । वेदव्यासले महाभारतको कथा भगवान् गणेशले लेखेको मानिन्छ । शास्त्रका अनुसार महर्षि पराशर र सत्यवतीका पुत्र वेदव्यास महान् विद्वान हुन् । उनले वेदहरूलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरे । आफ्नो अलौकिक शक्ति र जीवन दिने ज्ञानको कारण, उनी अमर छन् । यही कारण हो कलियुगमा उनी जीवित छन् ।
कृपाचार्य – कौरवहरूको तर्फबाट लडेका कृपाचार्य आज पनि जीवित छन्, महाभारतमा आज पनि दुई जना जीवित रहेको उल्लेख छ । एक अश्वत्थामा र अर्को पाण्डव र कौरवहरूका गुरु कृपाचार्य हुन् । कृपाचार्य महाभारतको युद्धमा बाँचेका १८ महान् योद्धामध्ये एक थिए । कृपाचार्यले कौरवहरूको तर्फबाट महाभारत युद्धमा पनि भाग लिएका थिए । कृपाचार्य आज पनि जीवित छन् भनी मानिसहरू विश्वास गर्छन् । धेरै हिन्दू ग्रन्थहरूमा पनि यसको उल्लेख छ ।
यी मानिससँग हुन्छ अथाह ज्ञान !
स्वस्थानी व्रत एवं माघस्नान आजदेखि घरघरमा सुरु गरिँदै, शालिनदीमा १५० व्रतालु
यस्ता मानिससँग रिसाउँछिन् माता लक्ष्मी
प्रवेश नाका सिल गरिएपछि सुनसान भयो देवघाट